Dhaqaatiirta UK oo qof ka daweeyay HIV - BBC News Somali
Qof bukaan ah oo ku nool dalka UK ayaa la sheegay in markii la baaray jirkiisa laga waayay cudurka HIV-ga oo uu markii hore qabay, sababtana waxa ay tahay kadib markii lagu talaalay unugyo cusub, kuwaas oo looga bixiyay qof dhintay oo la sheegay in jirkiisa uu lahaa adkaysi badan.
Balse dhaqaatiirta ayaa ka foojigan in ay ku dhawaaqaan in dawo loo heley HIV-ga oo la ogyahay in uusan wax daawo ah lahayn.
Waa qofkii labaad oo qaabkan lagu daweeyo, waxayna cilmi baarayaasha sheegeen in qaabkan uu yahay mid aanan ku habboonayn dadka xanuunada kale ka fayoow ee balse qaba HIV-ga oo isugu horseeda cudurka AIDS-ka.
Bukaankan oo aan magaciisa la shaacin ayaa joojiyay qaadashada dawooyinkii kaalmaatiga ahaa ee HIV-ga.
10 sanno ka hor, Timothy Brown ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee gabi ahaanba laga daweeyay cudurka HIV-AIDS kadib markii lagu shubay dhuuxa lafaha oo uu leeyahay qof dhintay oo adkaysi u lahaa cudurada jirka soo weerara.
Dhaqaatiirta ayaa waxa ay hadda sheegayaan in ay caddeyn u heleen in bukaankii hore uusan ahayn arrin qariib ah, maadaamaa isla qaabkii la marayna ay xaqiiqadu tahay in habkan uu yahay mid shaqayn kara sida uu qabo Prof Ravindra Gupta.
Image caption Kaniiniyada kaalmaatiga
Waxaa jira dadka qaar oo leh unugyo ka samaysan hiddo sidde adkaysi u leh in ay xanuunada soo weeraraan, waxaana loo yaqaanaa CCR5, kuwaas oo haddii unugyadooda lagu talaalo qof kale oo qaba xanuunkan ay ka fayoobaanayaan.
Hase yeeshee waxaa sii jiraya waxyaabo cudurka ka mid ah oo jirka kusii haraya, kuwaas oo siyaabo kale xal loogu heli karo.
Dhaqaatiirta waxa ay sheegeen in natiijada ay tahay mid dhiirogalin leh.